Gudoomiyihii Ceelbuur Iyo Ilaaladiisii oo Muqdisho Duleedkeeda Lagu Dilay. – Shabakadda Amiirnuur
January 23, 2018 2:21 pm by admin Views: 219
Weerar ay Xarakada Al-Shabaab ka geysatay duleedka magaalada Muqdisho galinkii dambe ee maanta ayaa waxaa ku dhintay gudoomiyihii dowladda ugu magacawnaa degmada Ceelbuur iyo ilaaladiisii.
Gaari Qooqan ah oo ay saarnaayeen ayaa waxaa qarax lagula beegsaday degaanka KM13 ee duleedka magaalada Muqdisho xilli uu socdaal ku jiray, waxaana ay goob joogayaashu sheegayaan in uu gaarigu soo gaaray burbur xooggan.
Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkan lagu dilay gudoomiyihii Ceelbuur oo la oran jiray BIyo Quute, kaasoo muddo dhowr jeer ah degmadaasi kusoo hogaamiyay ciidamada Xabashida Itoobiya.
“Qarax ka dhacay duleedka Muqdisho waxaa ku halaagsamay Murtadiin uu kamid ahaa guddoomiyihii degmada Ceelbuur ugu magacaawnaa Kooxda Ridada” ayaa lagu yiri war kooban oo Al Shabaab kasoo baxay.
Tan iyo markii ay ciidamada Itoobiya isaga carareen magaalada Ceelbuur, Biyo Quute wuxuu ahaa nin ku nool magaalada Muqdisho oo la shaqeeya saraakiisha ammaanka iyo taliyaha ciidamada Xasilinta ninka lagu magacaabo Jacfar.